Van Gogh Museum dia namoaka sary hosodoko maro nataon'ny master tamin'ny endrika HD | Famoronana an-tserasera
La fandraisana anjara lehibe izay vitan'ny tranombakoka maro eran'izao tontolo izao ho an'izay rehetra misintona na mankasitraka ny antsipirian'ny sangan'asa fanaovana hosodoko amin'ny solosaina, takelaka na finday avoakany dia manamarika.
Androany no ahafantarana fa ny Van Gogh Museum dia namoaka avy tao amin'ny tranonkalany maro amin'ireo sary sy sary hosodoko an'ny tompony nomerika amin'ny HD. Fahafahana lehibe handinihana ny teknika sy ny sary hosodoko amin'ity mpanakanto mahatalanjona ity izay nanaitra sy nampifanintontsintona ny tabilao hosodoko tamin'ny volony sy ireo tanamasoandro ireo izay nisy fiatraikany lehibe toy izany.
Afaka avy amin'ny tranokalan'izy ireo mahita sary sy sary hosodoko an'arivony an'ny tompon'ny Holandey lehibe nanaitra ny sangany tamin'ny androny tamin'ireny loko sy zavatra ireny izay novainy tanteraka tamin'ny fomba fijery mbola tsy heno hatramin'izao.
Ankehitriny ny fahafahantsika miditra amin'ny sary sy sary hosodoko maro dia mamela antsika manakaiky kokoa ny fandalinana ny asany amin'ny fomba saika milimetatra, satria miaraka amin'ny zoom dia afaka jerentsika ny tadiny sy ireo endriny manokana. Ho an'ireo izay mianatra Fine Arts na mampianatra tena dia loharanon'ny fahendrena tsy mety ritra eo amin'ny sehatry ny hosodoko.
Tsaroantsika ihany koa ny maha-radikaly ny zavakantony tamin'ny fotoana nanombohany ekena amin'ny tontolo somary mpandala ny nentin-drazana Ary izany dia mandraka ankehitriny na dia ny ankamaroan'ny sangan'asany aza dia mbola manohy ny fiatraikany noho ny loko miloko ampiasaina sy ireo famafazana borosy nahomby indrindra, ary amin'ny tranga sasany aza dia mahery setra mihitsy aza mba hamoronana endrika manokana.
Manana ny rohy mankany amin'ny tranokala Museum ianao Van Gogh avy eto. Fotoana tsy misy toa azy hanakaiky kokoa ny iray amin'ireo tompon'ny sary hosodoko izay manentana hatrany ireo mpanao hosodoko sy mpanao sary an-tsary manerana an'izao tontolo izao. Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nihaona tamin'ny tolo-kevitra famoronana hanahaka ny Ny efitranon'i Van Gogh any Arles.
Raha tianao midira sary maimaimpoana avy amin'ny tranombakoka hafa, avia avy amin'ity rohy ity mankany amin'ny Metropolitan Museum of Art any New York.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny Van Gogh Museum dia namoaka ny sary sy sary hosodoko an'ny tompony amin'ny endrika nomerika HD